Siyaasiga C/raxman C/shakur oo Madaxda Dowladda ku Karbaashay Weeraradii ugu Dambeeyay & Sababta AMISOM u dishay Askariga Soomaaliyeed | Siyaasiga C/raxman C/shakur oo Madaxda Dowladda ku Karbaashay Weeraradii ugu Dambeeyay & Sababta AMISOM u dishay Askariga Soomaaliyeed | Hal Sheegaha La Hubo
Siyaasiga C/raxman C/shakur oo Madaxda Dowladda ku Karbaashay Weeraradii ugu Dambeeyay & Sababta AMISOM u dishay Askariga Soomaaliyeed
C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mida siyaasiyiinta dalka Soomaaliya oo ku kacsan DF Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa wax aan maangal ahay ku tilmaamay in aysan dawladu ilaa iyo haatan ka hadlin weeraradii dhagar qabayaasha Alshabaab ku dileen ku dhowaad 50 sida uu yiri.
Siyaasiga ayaa sheegay in Shacabka Soomaaliyeed wuxuu Madaxda qaranka uga fadhiyo inay la hadlaan lana wadaagaan, arrimaha ay ka midka yihiin:
Ma aha maangal iyo mid shacabka qabata in aysan dawladu ilaa iyo haatan ka hadal weeraradii dhagar qabayaasha Alshabaab ku dileen ku dhowaad 50 ruux kuna dhaawaceen intoo kale. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu Madaxda qaranka uga fadhiyaa in ay la hadlaan lana wadaagaan.
1- Sharaxaad sidii ay wax u dhaceen iyo baaxada khasaaraha.
4- Talaabooyinka ay dawladu qaaday si ay shacabka hubanti u siiso in amnigu gacanta ku jiro, welwel kana looga saaro.
Shacabku weli wuu xusuustaa in uu halku-dhigga Xukuumadu ahaa “Isla-xisaabtan”
Waxaan tacsi mar labaad u diraynaa ehelada dadkii ku shahiiday weeraradaas. Waxaan Alle uga baryeynaa in uu caafimaad degdeg ah siiyo inta dhaawaca ah. Waxaan mar kale bogaadinaynaa geesiyada ciidanka Soomaaliyeed ee daafaca dalkooda iyo dadkooda u taagan. Waxaan shacabka ugu baaqaynaa in ay meel uga soo wada jeestaan kuwa gumaadka ku haya una diidan nabad iyo xasilooni.